ILIFE H70, ihe nhicha ikuku enweghị eriri ị na -achọ | Akụkọ Ngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | 24/08/2021 18:00 | General, Home
Ọ dị ka "ejiji" nke ndị na -ehicha oghere kwụ ọtọ bụ ntakịrị ihe, ma ọ bụ na ọ bụghị. Ma n'otu oge ahụ ha na -ama ifuru ụdị ihe nhicha ihe ndị ọzọ na -enye ikekwe ahụmịhe a pụrụ ịdabere na ya karịa maka nhicha ụlọ. O doro anya na nnukwu ndị na -ehicha ihe mkpofu nwere eriri ogologo dị iche iche abanyela n'akụkọ ihe mere eme. Ha na -eguzobekwa onwe ha n'ahịa ndị na -ehicha ihe ikuku na -enweghị eriri. Taa anyị na -ekwu maka ya AHU H70.
Echiche nke ndị na -ehicha ihe nhicha maka ndị na -atụkwasịghị obi na obere ụgbọ ala oval na -eku ume akụkụ ọ bụla nke ụlọ ahụ. Agaghị ekwu maka ya Ọdịiche dị n'ike nke anyị nwere ike ịchọta n'etiti ụdị 'conga' na ihe nhicha ihe na -ehicha aka. Nye ọtụtụ ndị, ngwaọrụ kachasị mma iji nweta nhicha nke ọma n'akụkụ niile nke ụlọ ma ọ bụ ọfịs anyị.
1 ILIFE H70 ihe ngwọta maka nhicha ụlọ
2 ILIFE H70 maka ụlọ gị
ILIFE H70 ihe ngwọta maka nhicha ụlọ
Ọ bụrụ na -amasị gị ịnụ ụtọ a gburugburu dị ọcha n'ụlọ ma ị na -echegbu onwe gị maka ihicha ya, ọ dị mkpa ịnweta enyemaka dịka o kwere mee. N'etiti ohere na -adịghị agwụ agwụ anyị nwere ike ịchọta taa n'ahịa anyị ga -ekwu maka ya AHU H70, ihe nchacha ihe wireless, vasatail na nwere ike zuru oke. Anyị na -ahụ iberibe na ngwa dị iche iche maka elu na ebe ọ bụla n'ime ụlọ.
Jide ya Ihe nhicha ikuku nke ILIFE H70 ọnụahịa kacha mma
Dabere na unyi na ụdị elu anyị nwere ike iji ụdị ike ike abụọ. Ike nkịtị, nke bara uru maka ọnọdụ ọ bụla nwere ikike ịmịkọrọ 10 Kpa. Ma ọ bụ anyị nwere ike rụọ ọrụ mode oke nke anyị ga -eji nweta ikike ịmịkọrọ ihe karịrị okpukpu abụọ 21 Ndipa, ka ọ ghara ịdị uzuzu uzuzu iguzogide.
Ekele diri gi moto na -enweghị ntụpọ Anyị ga -enweta ike niile dị mkpa n'ụzọ kacha gbachi nkịtị. Gụọ otu akpa unyi dị mfe na-enweghị ike nwere ike ruo lita 1,2. Na ndụ ya niile akụkụ bụ mbughari na -asachapụ ọbụnadị na igwe efere efere. Ọdịdị ya gbatịpụrụ agbagọ na njikwa ergonomic na -enye anyị ohere izopụ ala ahụ nke ọma, kamakwa elu elu ma ọ bụ ọbụna elu ụlọ.
ILIFE H70 maka ụlọ gị
Otu nkọwa dị mkpa iburu n'uche mgbe anyị chọrọ ịnweta ihe nhicha oghere bụ nnwere onwe nke ọ nwere ike ịnye anyị. ILIFE H70 bụ nwere batrị 2500 mAh. Ibu nke ga -enye anyị ohere nke gị ojiji na -aga n'ihu ruo nkeji iri anọ na ọnọdụ "nkịtị". Na ihe anyị nwere Ejiri 1% chajịa ọzọ n'ime naanị awa 5.
na ngwa maka ụdị nhicha ọ bụlaa, yana ire ụtọ nke isi ya kpuchiri ihe na -anaghị emebi arịa ụlọ ma ọ bụ mgbidi na -eme ya ngwa ọrụ kacha. Kpoo ọkụ ruo 180 degrees nakwa na a hapụghị oche ma ọ bụ ụkwụ tebụl adịghị ọcha. Ọbụna o nwere ọkụ na oriọna LED maka akụkụ ndị ahụ nwere ọhụhụ adịghị mma.
Ọ bụrụ na ILIFE H70 onye na-ehicha ihe ikuku na-enweghị eriri aka bụ ihe ị na -achọ mee ya nke gị na ọnụahịa kacha mma na Aliexpress na -enweghị ebubo mbupu. Echekwala ọzọ ka ụlọ gị wee dị ọcha dịka o kwesiri. Ma o nweela ngwá ọrụ nhicha kacha na -enweghị imefu ihe karịrị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » ILIFE H70, ihe nhicha ikuku enweghị eriri ị na -achọ
Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, nyocha ya na ọnụahịa yana atụmatụ